ထိပ်တန်းငါးဖမ်းစက်ရဲ့ function ကိုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု - ဗီဒီယိုကိုပေါက်စက် | ကစားတဲ့စက် | ဂိမ်းစက်ငါးမျှား | မာရီယိုပေါက်ဂိမ်းစက်
Whatsapp / WeChat / မိုဘိုင်း +852 51981365
နေအိမ် » ထိပ်တန်းငါးဖမ်းစက်ရဲ့ function ကိုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
အစိုင်အခဲ Wood ကကစားတဲ့စက်
ဘီးထုတ်ကုန်စက်လောင်းကစား 32inch သြစတြေးလျဇိမ်ခံအီလက်ထရောနစ်ကစားတဲ့
6/8/12 ကစားသမား / ထိုင်ခုံအီလက်ထရောနစ်စူပါသူဌေးက Man 36 ဘောလုံးရုရှားကစားတဲ့ဘီးစက်
6/8/12 ဇိမ်ခံကစားသမားကာစီနိုအီလက်ထရောနစ်ဘင်ဂိုကစားကစားတဲ့ Air ကိုဂိမ်းစက်လေညင်းတိုက်ခတ်ခြင်း
စျေးပေါ ORIGINAL ပေးသွင်း SUPER ROYAL အန်စာတုံး
Mini ကိုအကြွေစေ့ကစားတဲ့ဇယားဂျာမဏီထီပေါက်အီလက်ထရောနစ်ကစားတဲ့စက် operated
32Solid Wood ကကစားတဲ့ဘီး Deluxe လက်မ
IGS လောင်းကစားရုံ slot လက်ထရွန်းနစ်အညွန့်သမုဒ္ဒရာ STAR သမုဒ္ဒရာ KING1 /3Arcade အကြွေစေ့ငါးဖမ်း GAME စက်များဖြင့်အိုင်စီတီ OPRION လောင်းကစား operated
ပရိုမိုးရှင်းက New Style ကိုရွှေငါးဖမ်းလှံတံဂိမ်းအပန်းဖြေ Arcade စက်
ထိပ်တန်းငါးဖမ်းစက်ရဲ့ function ကိုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများမှာ. ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဥစ္စာဓနများ. ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည် ဗီဒီယိုကိုပေါက်စက်, မာရီယိုပေါက်ဂိမ်းစက်, ဂိမ်းစက်ငါးမျှား. အဆက်အသွယ်ကိုအမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်.
ငါးဖမ်းစက် function ကို
1. ရေကိုဖိအားနဲ့အတိမ်အနက်ကိုအလိုအရ, အဆိုပါဗို့အားအလိုအလျှောက်ချိန်ညှိနေသည်, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးချိန်ညှိနေသည်, အမြင့်ဆုံးသော, အလတ်စားနှင့်အနိမ့်ဂီယာစက်တပ်ဆင်ထားပါသည်. ပါဝါ switch သည်ရေအရည်အသွေးနှင့်အမျိုးမျိုးသောငါးအခြေအနေများအရသိရသည်ချိန်ညှိနေသည်.
2, မသက်ဆိုင်ငန်များ, အလင်းရေအရည်အသွေးကို, နက်နဲရာရေတိရိစ္ဆာန်များက float စေရန်ပစ်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုအံ့အား.
3, Ultra-မြင့်သောခြေရာခံငါးလူဦးရေဥတု detector, အထူးသရေ၌သွေးအေးသတ္တဝါများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှ, ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်ငါးဖမ်းသမားမှအန္တရာယ်ကင်း.
4. ရေအတိမ်အနက်အညီ power supply Adjust, အမြင့်ဆုံးသော install, စက်အတွက်အလတ်စားနှင့်အနိမ့်ဂီယာ;
5. ရေကိုအရည်အသွေးနှင့်အမျိုးမျိုးသောငါး၏အခြေအနေနှင့်အညီအာဏာကို switch ကို Select လုပ်ပါ;
6, အဆိုပါဆွအမှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း function ကိုပစ်မှတ်ထား: ငါးဖမ်းကိရိယာများငါးရဲ့အဆွအမှတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်, ရုံငါးကိုထိခိုက်ငါးမျှားနှင့်မ. ငါးရဲ့ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့နှင့်၎င်း၏အသက်ရှူမှုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုအတားအဆီး by, ငါးကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာပိုမိုမြန်ဆန် float နှင့်နိုင်ပါတယ်. အိုမင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်, ငါးမူရင်းလတ်ဆတ်တက်ကြွပြည်နယ်ပြန်ဆက်နိုင်ပါသည်, သောမူရင်းနေရာသို့မဟုတ်လှောင်အိမ်ထဲသို့ပြန်သွင်းထားပြီးတော့ cultured နိုင်ပါသည်, နှင့်ကောင်းမွန်သောအရောင်းရဆုံးနှင့်လတ်ဆတ်သောအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူစျေးကွက်ရောင်းချနိုင်ပါ. ငါးဖမ်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုမှသတိထားရမှာနေစဉ်, ကအရည်အသွေးကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုယူထားပြီးလည်းရေထွက်ကုန်အရင်းအမြစ်များကိုအဘို့အခြို့သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရယူထားပြီး.
7, ကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့ငါးပစ်မှတ်မှတ်ပုံတင် function ကို: ငါးဖမ်းကိရိယာများငါးခန္ဓာကိုယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်, ကြီးငါးအိမ်သူအိမ်သားသေးငယ်တဲ့ငါးကိုယူ.
အဆိုပါငါးဖမ်းစက်မြန်နှုန်းမြင့် circuit ကို flashover မှအများဆုံးကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ထိန်းချုပ်မှုလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် anode အကြားစက်နှိုးပေါ်ပေါက်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်. ဤပြဿနာကိုတုန့်ပြန်, ကျနော်တို့နောက်ထပ်စက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရစေရန် anti-မီးအထီးကျန်မှုတွေကဆက်ပြောသည်ပါပြီ.
အဆိုပါငါးဖမ်းစက် drive ကိုထိန်းချုပ်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းစက်မှစိုစွတ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်. တစ်ခုလုံးကိုလျှပ်စစ်ငါးစက်၏တန်ခိုးအရင်းအမြစ်လုံးဝအဓိကထိန်းချုပ် drive ကို၏ယာဉ်မောင်းကိုထိန်းချုပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်. ငါးဖမ်းကိရိယာ၏အဓိက drive ကို damp ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, တစ်သွေးခုန်နှုန်းတစ်ခုလုံးကိုစက်ကိုမီးရှို့နိုင်ပါတယ်. စျေးကွက်အပေါ်အတော်များများကစက်တွေအပူလွန်ကျူးခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းကြသည်မဟုတ်. ကျနော်တို့အပြည့်အဝစက်၏ဒီဇိုင်းအတွက်စက်၏အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်စဉ်းစားပါ. အဆိုပါပျက်စေရေတိုင်ကီများအသုံးပြုခြင်း, ကသာအစိုဓာတ်ကိုတားဆီးမနိုင်, ဒါပေမယ့်လည်းအတင်းအကြပ်လွန်ကျူးအပူ.
သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုသိလိုလျှင် ထိပ်တန်းငါးဖမ်းစက်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျနိုငျ.
post ကိုအချိန်: 2019-07-02
ကွမ်ကျိုး Hongyao Animation ရဲ့ဆော့ဝဲနည်းပညာ Co. ,, Ltd မှတရုတ်နိုင်ငံတွင် Arcade ဂိမ်းစက်၏ဦးဆောင်ဂိမ်းများကိုဖြေရှင်းချက်ပေးသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်.
အထိုင်စက် play လုပ်နည်း
ကွမ်ကျိုး Hongyao Animation ရဲ့ဆော့ဝဲနည်းပညာ Co. ,, Ltd မှ. © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုအသုံးအနှုန်းများနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ